Aiza no ahitana ny backlinks tsara indrindra ho an'ny tranonkala SEO?
Raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao, dia mety fantatrao fa ny fananganana fanentanana kalitaon'ny kalitao dia tsy ampy mba hamoronana votoaty tsara sy hamahana ny hadisoana amin'ny toerany, tokony ho hita koa ny tranokalanao ho an'ny fitaovam-pikarohana amin'ny alàlan'ny fananganana rindrambaiko. Maro ireo fepetra samihafa tokony hohadinoina rehefa manangana backlinks ho an'ny tranonkala SEO ianao. Voalohany indrindra, tokony ho tonga any amin'ny tranokalanao avy any amin'ny vohikala aty amin'ny firenena izay tianao hotsinjovina tsara ny backlinks. Ankoatra izany, tokony havaozina avy ao amin'ny tranokala DA40-DA100 ny backlinks izay tokony hampiavaka ny tsenanareo sy ny orinasa. Raha toa ka misy ifandraisany amin'ny lohahevitra momba ny raharaham-barotra ny tranonkala iray miresaka momba ny tranonkala iray, ny fichier avy amin'ity pejy ity dia heverin'ny fitaovan'ny fikarohana araka izay mety sy azo itokisana.Ireo rakitra rehetrao dia tokony ampidirina ao anaty votoaty raha tsy misy scriptes automatique. Tokony ho fantatrao fa afaka mamela ny rohy aterak'ireo Google dia mamela an'i Google mora hita ary mahazo sazy henjana araka ny fanavaozana farany nataon'i Google Panda.Azo ekena ny hametrahana backlinks amin'ny tranonkala izay matetika nohidinin'ny mpikirakira sy ny mpisera Google. Midika izany fa tokony hiara-miasa amin'ny mpitarika ao amin'ny tsenanao na ny iray amin'ireo mpikambana mifandray ianao mba hahazoana ny finday mety tsara indrindra ho an'ny tranonkala SEO. Ankoatra izany, mila mahazo antoka ianao fa tsy manangana rohy amin'ny tranonkala voasivana na voarara.
Noho izany, raha efa nandinika ireo fiheverana voalaza tetsy ambony ianao, dia afaka mahita loharanom-pahombiazana tonga lafatra izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamorona drafitra amin'ny antsipiriany mifototra amin'ireo fepetra mifantina. Tsy tadidiko ny hividy rohy mifototra amin'ny mombamomba ny tranonkala. Ity algorithm Google ity dia tsy misy fanavaozana intsony ary afaka mampiseho anao ny vokatra azo tsapain-tanana. Be dia be ny fananganana tranonkala mifandraika amin'ny lozam-pifamoivoizana goavana, hany ka ny fividianana rohy miankina afa-tsy amin'ireto metrika ireto dia tsy hahatratra ny tanjonao.
Mba hahazoana ny siramamy azo antoka sy azo zaraina amin'ny tranonkalanao
pejy, mila mividy rohy amin'ireo pejy bakilika mahazatra. Ireo pejy ireo dia manana ny loha-hevitra mitovy na mifandraika amin'ny tranonkalanao ary manana fahafahana tena tsara hahatongavana amin'ny tsenanareo.
Ireto misy fomba fanao samihafa mety hahitana pejy mahazatra ho an'ny sehatr'asa misy anao:
Search for keyword or URL
Manome ny vokatra tsara indrindra izy rehefa mikaroka votoaty manan-danja ianao ao anatin'ny votoatin'ny tranokalan'ny mpampanonta anao. Azonao atao koa ny mikaroka amin'ny URL iray manokana momba ny sehatra izay tianao hampidirana ny rohy amin'ny tranonkala. Ireo fikarohana ireo dia manome fahafahana anao hahita pejy web izay tena manan-danja amin'ny orinasanao ary mahazo rohy avy amin'ireo loharano ireo.
Fikarohana amin'ny anaran'ny sehatra
Ny fahafahana iray hafa hananana backlinks tsara indrindra ho an'ny SEO dia ny mitady pejy Internet avy amin'ny faritra misy sehatr'asa. Azonao atao ny manondro hoe inona avy ny faritra misy faritra tianao sy ny lisitr'ireo venty tsara indrindra. Google dia mankasitraka domains tahaka. Edu,. fr. ,. gov satria mahazatra izy ireo, mendri-pitokisana ary manome fampahalalana azo itokisana. Midika izany fa hitondra valisoa be dia be ireo backlinks avy amin'ireny sehatra ireny.
Mety hahita tranonkala iray manan-danja ianao amin'ny fisafidianana ny kilasin'ny orinasa mifandraika amin'ny indostrianao. Azonao atao ny misafidy sokajy maromaro raha toa ka ampiharina amin'ny loharano samihafa ny loharano Internet. Ataovy azo antoka fa azonao jerena ireo tranonkala mahasoa. Raha tsy izany, tsy mety ny manangana fanentanana fananganana rohy dia mety hampidina ny lisitry ny habaka ary hanimba ny ezaka SEO anao Source .